Mitady ny Anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra? Ho anao ity lisitra ity - Hafa
67 amin'ireo seho Anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra (tsy misy laharana filaharana)
Inona no mamaritra ny 'anime tsara indrindra' amin'ny fotoana rehetra?
Ny valiny lojika indrindra dia mifototra amin'ny naoty sy hevitra avy amin'ny tranonkala toa an'i MAL (MyAnimeList).
Ny olana amin'izany dia: voafetra ho an'ny mpihaino MAL'S io. Ary ny hevitra sasany dia tsy izay heveriko ho fanamarihana 'tena izy'. Fitarainana zaza fotsiny avy amin'ny mpankafy anime.
Dia manana ianao fandatsaham-bato anime izay tantanan'i Japon , manangona vato tsy mihoatra ny 10.000-100.000 + amin'ny fitambarany. Isa kely rehefa mandinika ireo mpankafy 50-100 tapitrisa manerantany ianao.
Noho izany dia tsy misy fomba lavorary handaminana ireo adihevitra momba ny lohahevitra ireo.
Ka noho izany dia nilaza… Ity ny lisitr'ilay anime tena lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra!
Anime izay tsapako no MAHAY INDRINDRA, ary mendrika ny trosa rehetra na mihoatra noho izy ireo.
67 Anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra (tsy misy laharana filaharana):
Monster manao zavatra iray tsara: ambarao ny 'monster monster' ao anatintsika rehetra.
Ny hany ilaina dia ny ratsy fipetrahan'ny toe-javatra hiteraka olona amin'ny làlana maizina. Mamoha ny ratsy izay tsy noeritreretinay ho vitantsika mihitsy.
Vitsy ny anime no tena zava-misy.
Violet Evergarden mamiratra noho ny fitantarana am-po sy feno fihetseham-po milaza izany.
Tsy mahatsapa fiaraha-miory fotsiny amin'ny mpilalao fototra ianao fa mahatsapa izany ihany koa ho an'ireo mpilalao mpanohana izay miseho eny an-dàlana.
Violet Evergarden dia mampifangaro seho mahafinaritra, sary mihetsika mahatalanjona, ary tantara mahery vaika rehetra amin'ny baolina iray lehibe.
3. Clannad: Aorian'ny Tantara
Clannad season 1 tsara, fa tsy mampitaha ny halehiben'ny vanim-potoana 2 akory.
Toa an'i Violet Evergarden, Clannad After Story dia feno fanaintainana sy alahelo. Samy izy roa ireo VITSY anime dia afaka naneho an'izany tonga lafatra.
Jormungand no anime tokana amin'ny karazany nanehoana ny fiainan'ireo mpivarotra fitaovam-piadiana. Ny zava-misy amin'ny fitantarana tantara, zavatra niainana ary ny fomba fiainana notarihin'ireo mpivarotra fitaovam-piadiana dia tonga ara-potoana.
Sanganasa amin'ny zavatra ataony sy kasainy hatao ity anime ity.
Niditra tao amin'ny sary i Madoka Magica ary nilaza hoe: 'f * ck daholo ity zazavavy majika mpanao ozona ity, fotoana hampihetsiketsehana'.
Izany no mahatonga Madoka Magica tsara ery. Raha tokony hanaraka ny lalana mahazatra, dia tapaka fivoriambe ary namadika ilay karazana ho zavatra maizina sy manelingelina.
6. Lagoon mainty
Toa an'i Jormungand, Black Lagoon dia iray amin'ireo anime mahatsikaiky indrindra eto an-tany.
Ny toetra amam-panahy tsirairay dia manana ny lasa misy olana mifandraika amin'ny fanolanana, fanararaotana ara-nofo, zava-mahadomelina, heloka bevava, ary izay rehetra asehon'ny ambanilanitra.
Black Lagoon no manao azy tsara indrindra amin'ity departemanta ity. Ary miteny ny hetsika.
Psycho Pass dia mijery ny sci-fi amin'ny fomba fijerin'ny polisy sy ny lalàna. Ary aza adino ny momba ny haitao izay ka mialoha ny fotoany amin'ity andiany anime ity.
Vitsy ny andiana polisy raha ny amin'ny tontolon'ny anime, ary Psycho Pass dia mahaliana ny mijery azy tsy misy cliches.
Ny fiantsoana ny Psycho Pass hoe 'original' dia fanambarana kely fotsiny. Tsy misy fampitahana ny zavatra ataony.
Voaro amin'ny lohany ny Sword Art Online be loatra. Raha ny marina dia izany no nahitako azy. ny mpankahala nahaliana ahy.
Ny tsara indrindra ataon'ny SAO dia ny fampifangaroana lalao amin'ny zava-misy virtoaly, ary ny fanaovana azy somary maizina manitra ny zava-manitra.
Amin'ny resaka gaming sy VR, tsy misy anime manatona akaiky izay soloin'ny SAO. Ary ny fahombiazany dia mihoatra ny mendrika.
Anime izay mialoha ny androny.
Ary Sword Art Online: Alicization no tsara indrindra hitantsika hatramin'ny andian-tantara SAO hatreto.
Akame Ga Kill no mitranga rehefa mikomy amin'ny governemanta sy fiaraha-monina tsy misy fotony ny olom-pirenena amin'ny firenena.
Izany no momba an'i Akame Ga Kill, ary manamarina ny heviny amin'ny alàlan'ny herisetra, hetsika mahery vaika ary ny sasany amin'ireo tsara indrindra sehatra ady izay hatolotry ny anime.
Somary tsy mahazatra ihany koa ny fomba itondrany ireo mpilalao fototra (sy ny fahafatesan'izy ireo).
Miadana miadana i Shiki, fa miafara amin'ny lasa zavatra maizina be, manelingelina ary sarotra fitondran-tena, ka tsy ho fantatrao izay hoeritreretina.
Io singa iray io no tiako indrindra momba an'i Shiki. Iray amin'ireo horohoro tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Amin'ny lafiny iray, Hinamatsuri dia hahatonga anao hihomehy noho ny hatsikana mampihomehy.
Etsy ankilany, ny anime dia hitarika anao mitomany ary mitomany.
Amin'ireo sarimihetsika rehetra nojereko, ka vitsy no afaka mahavita maneho hatsikana sy 'alahelo' tsara raha tsy misy mahomby ny hafa.
Izay no mampiavaka an'i Hinamatsuri ho ahy.
Ny dragona miara-miaina amin'ny olombelona dia tsy mamorona ho azy. Saingy mahaliana ny fomba fampiharana ny sary an-tsehatra an'io anime io ary mamadika azy ho hatsikana mahatsikaiky, miaraka amin'ireo singa 'slice of life'.
Ary hita izany tsara manao azy.
Iray amin'ireo anime vitsivitsy hiatrehana hevitra sarotra toa ny famoizam-po sy ny famonoan-tena.
Noho io antony io ihany, ary ho an'ny Ahoana aseho hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia mampihetsi-po loatra ka tsy raharahiana.
Mankasitraka ny sary miavaka ihany koa aho.
DBZ dia kilasika. Izany no antony mahatonga ny indostrian'ny anime na dia eo amin'ny sehatra manerantany aza.
Tsy misy zavatra hafa holazaina.
Bleach dia DBZ amin'ny ankapobeny raha tsy misy ny endri-tsoratra OP.
Lazao izay tadiavinao momba ny Bleach, fa tsy misy anime afaka manolo azy amin'ny zavatra ataony.
Mifandraika: Ny sary nalaina Anime GREATESTA avy amin'ny Bleach izay mijoro amin'ny fitsapana ny fotoana
16. mpamosavy manidina
Flying Witch no tsotra indrindra, indrindra sasatra andiany efa nojereko.
Tsy misy klika, serivisy mpankafy na hadalana mahazatra hita ao amin'ny sarimiaina andavanandronao. Ary izany no mampiavaka an'i Flying Witch.
Io no zavatra akaiky indrindra amin'ny fahitalavitra 'tena izy', afa-tsy ny mavitrika.
17. Ny Ampakariko dia zazavavindrano
Andian-tsarimihetsika anime tsy dia misy dikany izay tsy dia misy fitiavana na fankasitrahana firy.
Ho an'ny fotoanany ny hatsikana (sy ny parody) dia anisan'ny tena tsara vitan'ny tena sendra ahy.
Hatsikana am-boalohany misy azy manokana.
Fairy Tail no manana traikefa nahafinaritra indrindra natolotry ny anime. Azo ampitahaina amin'ny fampisehoana toa ny DBZ.
Mbola tsy nahita olona marobe tsy hay hadinoina sy sarobidy aho miaraka amin'izay.
Amin'ny ankapobeny dia andian-tsarimihetsika Shounen ankafiziko tamin'ny taonjato faha-21 io.
19. Ny fiainana mampidi-doza an'ny Saiki K
Iray amin'ireo hatsikana mahatsikaiky sy mamorona indrindra tato ho ato. Tiako ilay ompa ratsy tropes, tsy misy Raha ny marina miditra amin'io faritany io.
20. Re Zero: Manomboka ny fiainana amin'ny tontolo hafa
Anime iray hafa izay manompa ny tropes mahazatra, ary tsy dia matotra loatra amin'ny tenany.
Ary ny lafiny lalina, maizina ary ara-psikolojika an'ny Re Zero dia manao azy ho anime izay hampisaintsaina anao.
Mifandraika: Antony 5 tsotra maninona no tsara kokoa i Emilia noho ny sisa amin'ny Re
21. Higurashi: Rehefa Mitomany izy ireo
Higurashi dia toy ny fanandramana siansa lehibe iray. Saika tsy hay intsony ny hahafantatra izay hitranga manaraka, sy ny ho avin'ny raharaha.
Ho an'ny andiana horohoro dia tsy azo vinavinaina, marani-tsaina ary iray amin'ireo mampieritreritra indrindra izany.
22. Tanaka Kun dia tsy misy lisitra foana
Anime tsotra misy hatsikana tsotra. Tsotra be izany ka mampihomehy, ary i Tanaka Kun dia miala sasatra ampy hatory amin'ny.
Amin'ny fomba tsara.
Sombin'aina izay mifantoka amin'ny foto-kevitra toy ny fanatsarana tena, fitomboana, fisainana ary fifandraisana
Tsy afaka mampitaha an'i Barakamon ianao. Ary ho an'ny andiany fohy dia manana kalitao maro ao anatiny.
24. Ilay maherifoko akademia
My Hero Academia dia iray amin'ireo sarimihetsika malaza indrindra tamin'ny taonjato faha-21. Nila zava-baovao ny karazana Shounen, ary ny MHA no valiny amin'izany filàna izany.
Shakugan No Shana dia izao tontolo izao lehibe feno Denizens, Flame Haze ary ny olona izay tratra eo afovoany.
Izy io dia manana fifangaroana tsara amin'ireo singa mihoatra ny natiora (tsy mandeha ambonin'ilay ambony), sarimiaina mendrika ary olona mahaliana miaraka amin'ny fahaiza-manao mahaliana.
Samy hafa ny vanim-potoana tsirairay, ary mahazatra amin'ny ankapobeny izany eo imasoko.
26. Eureka Fito
Andiana mecha tsy misy tsy misy fampitahana.
Eureka Fito (nataon'i Studio Bones) dia mampiasa zava-miafina, andinin-tsoratra masina ao amin'ny Baiboly, olona samihafa ary tantaram-pitiavana hitantara ny tantarany.
Ary tsy misy Mecha eto an-tany izay manao tsara kokoa amin'ity faritra ity (eny fa na dia i Darling In The Franxx aza).
27. Fangovitana vy feno!
Panic Metal feno maka tantaram-pitiavana any amin'ny lisea, ary manampy ny fampihorohoroana, ny hetsika ary ny realisme.
Ity dia iray amin'ireo anime tsy fahita firy nahazo tsara kokoa isaky ny vanim-potoana novokarina.
28. Ny fiakaran'ny mahery fo mpiaro
Ny fiakaran'ny mahery fo ampinga dia a tato ho ato andian-tantara anime nanomboka tamin'ny taona 2019. Fa io dia iray amin'ireo Isekai vitsy isaiko fatratra.
Tolona azo tanterahina Naofumi manohitra ny fenitra avo roa heny ny herisetra ara-nofo, ary ny fomba inoana ny tenin'ilay vehivavy TSY porofo.
Ny fanalam-baraka tsy miova ny toetrany, ary ny ankamaroan'ny olona mandà ny 'hieritreritra' na hametraka fanontaniana raha marina na tsia… Tsy lazaina intsony ny fifandraisan'i Naofumi amin'i Raphtalia (sy zavatra hafa).
Shield Hero dia andiany misy dikany toy ny tsy misy hafa, ary izany manome tsara kokoa noho ny fitakian'ny ankamaroan'ny anime.
29. Lahatra Zero
Raha resaka anime miaraka amina singa ara-tantara, Fate Zero no manjaka. Indrindra ho an'ireo ambaratongam-pihetsiketsehana, fialantsiny ary fialamboly.
Tsy nametraka andian-tantara Fate hafa momba ny Fate Zero aho, fa andian-dahatsoratra kalitao be loatra izay FANTATRA mamiratra amin'ny karazana hetsika.
30. Live Live
Toa mahafatifaty ny Live School, fa raha ny tena izy dia iray amin'ireo lalina mampiseho amin'ity lisitra ity. Famahana lohahevitra toy ny aretin-tsaina, psychosis, hallucination ary lohahevitra mitovy amin'izany.
Toa an'i Madoka Magica, ny anime dia mamitaka anao amin'ny fieritreretana fa andian-tantara mahafinaritra mandra-pahatapitry ny farany tsy hiverina intsony.
Vakio: 20 amin'ireo andian-tsarimihetsika maizina indrindra izay hanaitra anao
Gurren Lagann dia a natrehin'ireo andiany. Ary rehefa miteny aho fa mampieboebo - Midika izany fa mavitrika, mampihomehy, manentana ary mampipoitra anao.
Hitako hoe avy aiza ny fampisehoana toa an'i Kill La Kill. Gurren Lagann dia ho kilasika foana eo imasoko.
32. Ny devoly dia mpizara ampahany
Toy ny fiainana mampidi-doza ankehitriny k, mamorona amin'ny fomba fikirakirany ny tenany ity anime ity. Vitsy ny hatsikana mampihomehy afaka milaza fa mamorona toa IZAO izy ireo nefa mbola miala voly.
Mampihomehy fotsiny ny tantara ka tsy mampihomehy. Tena mila vanim-potoana 2 isika satria ny devoly dia mpizara fotoana!
Andian-tsarimihetsika anime Thought Provoking, mifantoka amin'ny tsy misy afa-tsy:
Miara-miasa hamaha ny piozila.
Ary 'milalao detective'.
Etsy ambonin'io dia tsy toa sarangan'izao tontolo izao io, fa ny fomba fampiharana azy dia tantara hafa.
34. Raha ho an'ny zanako vavy
Raha ho an'ny zanako vavy navoaka tamin'ny taona 2019. Ary niditra tao aho tsy misy antenaina.
Ny fizarana voalohany dia manomboka amin'i Dale izay mahita zaza demonia any an'ala, izay novonoina ho faty ny ankohonany.
Noraisiny ity zazavavy ity ary nantsoiny hoe 'Latina', ary avy eo no niavian'ny lohatenin'ny anime.
A silaka fiainana milamina miaraka amina fizarana mafana be izay ifamatoran'ny mpilalao fototra ary mitombo hatrany ny fifandraisan'izy ireo.
Tsy zava-dehibe ny tetika, ary tsy izy no anime mirehitra indrindra ka tsy hahaliana ny olona izay mankafy Shounen izany. Fa ny zavatra entiny - Raha ho an'ny zanako vavy dia manafana ny fo tahaka ny mahazo azy.
Manana lafiny ara-pientanam-po izy io toa an'i Violet Evergarden.
35. Kino's Travels: The World mahafinaritra
Kino's Travels: Ilay tontolo tsara tarehy dia andiany anime izay manao zavatra tsara dia tsara: mitantara.
Mitety an'izao tontolo izao amin'ny moto i Kino, mijanona tsy mihoatra ny 3 andro isaky ny firenena.
Eo ambanin'ity sehatra ity dia mampiharihary fahitana lalina momba ny olombelona sy ny fomba fiainantsika ity anime ity, eo an-tampon'ny fisainana sy psikolojia izay ao ambadiky ny kolontsaina isan-karazany iainantsika.
Mora ny iray amin'ireo anime malaza indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Kokoro Connect dia tsy sokajiana ho andiany 'psikolojika', fa amin'ny ahoana no anehoana azy? izany antoka dia.
Ampahany amin'ny fiainana sy ny tantaram-pitiavana, ity anime ity dia hahatonga anao hieritreritra tsy misy fampisehoana hafa amin'ny karazany. Momba ny zavatra toa ny zavatra ataon'ny namanao antsoina hoe 'tena' momba anao rehefa miresaka ao aorianao. Na izay 'eritreretiny' momba anao amin'ny ankapobeny.
37. Fanamarihana ho faty
Taorian'ny nijereko ny Death Note tamin'ity taona ity (2019) hitako ny antony mahatonga an'ity anime ity soso-kevitra olona maro be.
Matetika aho no misoroka ny seho hyped up, fa ny famirapiratan'ny teti-dratsy, ny toetra amam-panahy ary ny lafiny psikolojika dia tsy misy kilema.
Omeko 10/10 ny Death Note. Io no iray amin'ireo anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Shirobako dia anime Mila mahita ny mpankafy REHETRA.
Momba ny indostrian'ny anime miaraka amina fakana zava-misy ny zava-mitranga ao ambadiky ny seho.
Ny enta-mavesatra amin'ny asa, animator, studio ary mpiasa miasa be loatra. Ny fandaharam-potoana, ny fomba fanaovana an-tsarimihetsika, fitarihana ary famoronana…
Tsy hahita antsipiriany iray tsy hita ianao amin'ny fizotran'ny zavatra miditra amin'ny anime any Japon.
Tsy ny zava-misy fotsiny anefa, ara-dalàna io hatrany amin'ny kalitao sy fialamboly azonao avy any Shirobako.
Azo antoka fa iray amin'ireo anime tsara indrindra tamin'ny 2010's.
Sakura Quest dia ambanin-javatra slice of life series. Namboarina tamin'ny 2017 raha tsy diso aho.
Izy io dia fifangaroana tsara amin'ny fizahan-tany, orinasa, hatsikana tsotra ary tantara misy dikany izay manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany.
Tsy mety io lisitra io raha tsy teo!
40. Kenichi: Ilay mpianatra mahery indrindra
Kenichi dia nanapa-kevitra ny hampiofana ny haiady, manome azy hery hiaro tena sy hamerina ny fahatokisany tena.
Ao anatin'ny tontolo iray izay isehoan'ny fanararaotana isan'andro, manaitaitra aingam-panahy ity anime ity. Ho an'ny tanora indrindra.
41. Mpiambina ny Fanahy Masina
Tiako ny anime miaraka amina fahatsapana «tantara» mifamatotra amin'izany.
Guardian Of The Holy Spirit dia momba ny andriana nandao sy ny vehivavy mpiambina azy.
Ny Production I.G dia nihoatra ny ainy indray (nanao Psycho Pass) izy ireo.
42. Ady sakafo
Inona ny anime fantatrao fa mandray sakafo, ary manampy ecchi nefa tsy manao hadalana?
Ny Food Wars dia manjaka amin'ny sokajy 'sakafo', na dia zavatra iray aza izany.
Tsy hahita Shounen mamorona sy tsy manam-paharoa kokoa ianao izay mandray làlana tsy mahazatra toa ny Food Wars.
Mendrika ny fahombiazana rehetra azo.
43. Railgun Scientific iray
Loharano: Mikoto Misaka
Railgun, mitovy amin'i Hinamatsuri, dia mifantoka amin'ny zavatra roa miaraka.
Marary ny hetsika, ary mangatsiatsiaka ny ampahany amin'ny fiainana.
Ary raha mbola eo amin'ny lohahevitra isika: Railgun dia anime Lehibe kokoa noho ny Magical Index.
44. D. Lehilahy Gray
D. Gray Man nahatsapa hatrizay samy hafa ho ahy. Ny ankamaroan'ny Shounen dia… Shounen.
Misy 1000's Shounen's ara-bakiteny satria tototry ny BS ny karazany.
D. Gray Man dia iray amin'ireo tànana misongadina fa tsy manaparitaka fampisehoana tsara hafa mitovy kalitao.
45. Kaody Geass
Code Geass no andiako anime Mecha / action anime # 1 hatrizay.
Ny teti-dratsy, ny tarehin-tsoratra stratejika, ny halozaky ny Lelouch… Be loatra ny anarana eto raha ny amin'ny antony maha-faran'izay mamirapiratra ny Code Geass.
Fa ny zavatra iray miavaka dia ny paikady paikady 'tahaka ny chess'.
Lelouch dia mieritreritra ny dingana 5 ary hanao izay rehetra ilaina mba hanalefahana ny olana mitranga amin'ny ady.
Misy ihany koa ny fitoviana eo amin'ny Lelouch Lamperouge sy Light Yagami avy amin'ny Death Note !.
46. ​​Efitra famonoana olona
Andian-tsarimihetsika vaovao hafa amin'ny sokajy 'sekoly' amin'ny anime.
Manararaotra ny fampitahana izany amin'ny sarim-pianaranao maoderina. Satria tsy manam-paharoa amin'ny fomba fanatonana azy sy ny mpilalao fototra: Koro Sensei dia voasoratra tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny toetranao mahazatra ankehitriny.
Ny tetika mihitsy dia tany am-boalohany ary tsy misy toa anao na inona na inona azonao andramana ny mampitaha azy ot.
Ny zavatra iray hajaiko indrindra momba an'i Samurai Champloo dia ny fomba fampifangaroany ny kolontsaina Samurai amin'ireo vibe ao amin'ny Hip Hop.
Tsy afaka mieritreritra an'izay anime manao an'io aho. Ary samy hafa be ireo mpilalao fototra 3, ka mahatonga azy ireo ho tadidy mora foana.
Samurai Champloo dia kilasika tanteraka.
Kaizaki Arata, NEET 27 taona dia nomena fotoana hafa 'hamerenana' ny fiainany. Manome azy ny fotoana hanamboarana ny hadisoany, ary hanao zavatra ho an'ny tenany.
ReLife dia andian-tsarimihetsika vaovao hafa mahagaga izay tsy dia misy dikany loatra.
Skip Beat dia diamondra miafina ny ankamaroan'ny olona tsy mahita ny famirapiratan'ny. Rehefa dinihina tokoa, dia manana fanbase, fa izany tsy mahazatra.
Izy io dia momba ny tovovavy iray izay manao valifaty amin'ilay sakaizany taloha izay nampiasa ny asany mafy, vola, ary naifve mba hahomby amin'ny asany amin'ny asany. Ny fanariana azy fotsiny toa azy tsy sh * t.
Mifandray amin'ny antony mahatonga ny valifaty aho. Fa ny kalitao entin'ity anime ity SATRIA izany antony izany no nanapoaka ahy.
Tsy manao seho tantaram-pitiavana toa an'ity intsony izy ireo.
Mifandraika: Ny lisitry ny farany Skip Beat Quotes azonao ampifandraisina
Charlotte dia a tsy manam-paharoa andiany. Izy io dia maka ny foto-kevitra mahazatra momba ny firenena mahery, ary atsipazo eo an-dohany.
Raha tokony hanana hery tsy manam-petra ny toetra tsirairay dia misy fetrany ny zavatra azon'izy ireo atao. Ary na ny lafiny ratsy amin'ny fampiasana ny fahaizany aza, manao azy ho zava-misy sy tsotra kokoa noho ny fampisehoana azo ampitahaina.
Mifandraika: Maninona i Charlotte no andiany Anime miavaka
Raha nahazo fotoana mety ho 'zaza' indray aho dia ity no anime hojereko.
Tsy misy serivisy mpankafy.
Tsy misy serivisy mpankafy 'andrana'.
Tsy misy BS mivily lalana.
Tsy misy ecchi.
Amin'ny ankapobeny: ny klika rehetra izay hitanao amin'ny andiany mitovy amin'izany dia tsy misy ao amin'ny LWA.
Studio Trigger dia nihoatra ny tenany, ary ny anime dia mendrika ny ekena bebe kokoa noho ny nahazoany hatreto.
Tsy misy na inona na inona toy ny sarimihetsika taloha taona 90's. Nandeha tamin'ny lalany manokana i Slayers, ary nanome aingam-panahy ireo tropista 'mahery vehivavy' hitanao amin'ny seho maoderina.
Antsoiko hoe kinova taloha an'ny sekoly Fairy Tail (tsy misy serivisy mpankafy). Safidy tsara ho an'ny mpankafy DBZ io.
Andian-tsarimihetsika taloha iray hafa izay tsy afaka nanampy tamin'ny fampidirana an'ity lisitra ity. Ny sasany amin'ireo sary sy sary an-tsekoly taloha dia tiako indrindra mandraka androany.
Tsy miresaka momba an'i Inuyasha betsaka aho, nefa mbola ankafiziko ihany na inona na inona.
Izy io dia am-boalohany ho an'ny fotoany, ary Isekai dia tsy hitovy raha tsy misy Inuyasha .
K-On no mpanjaka sy mpanjakavavin'i 'Moe' araka ny ahalalantsika azy. Saingy tsy izany no mahatonga ny anime hotononina.
K-on dia andian-tantara malaza izay tsy misy teti-dratsy tena izy, fa manana endri-tsoratra sy fizarana mampiala voly ampy hanaovana azy.
Ny hatsikana dia ny sasany amin'ireo tsara indrindra Hitako tamin'ny andiany anime, ary tsy hoheveriko ho hatsikana 'henjana' ny K-On.
55. Mpihinana fanahy
Soul Eater dia ambanin-javatra loatra amin'ny sokajy Shounen. Mahagaga ny fotoana tsy nipoiran'ity fampisehoana ity tamin'ny resaka. Satria ny anime mihitsy no antsoiko hoe 'mainstream' noho ny fahombiazany.
Ohatra voalohany amin'ny toa ny andian-tsarimihetsika Shounen 'lehibe' miaraka amin'ny vehivavy mahery fo (sy lehilahy). Ary tohano ireo mpilalao manana andraikitra lahy + vavy.
56. Kamuy volamena
Golden Kamuy dia andian-tantara tsy fahita firy amin'ny toetrany manan-tantara. Vitsy ny anime lasa lalina amin'ny tantarany toa an'i Golden Kamuy, izay manasongadina ny hazakazaka japoney taloha antsoina hoe: Ainu.
Ary ny fialamboly nataon'i Golden Kamuy nefa tsy dia nandia fianarana loatra dia nahatonga azy io hahafinaritra sy mahafinaritra ny mijery.
Vakio: 12 amin'ny anime lehibe indrindra momba ny kolontsaina japoney
57. Toerana lavitra lavitra noho izao rehetra izao
Raha fantatrao tsara aho - dia ho fantatrao fa izaho tsy mahazaka mijery anime ao amin'ny kinova ambany. Aleoko mijery voantso ary aza ialana amin'ny famakiana ny dikanteny miaraka.
SAINGY Toerana lavitra lavitra noho izao rehetra izao raha te hahalala be aho dia nijery azy tamin'ny kinova voalohany. Ary tratry ny kalitao aho.
Iray amin'ireo andiana traikefa nahafinaritra indrindra namoaka tamin'ny taona 2018 io.
Ny fiantsoana azy io ho 'manome aingam-panahy' dia fanamarihana ambany kokoa.
Yona Of The Dawn dia anime tiako hojerena foana. Faly aho fa nanao.
Na izany na tsy izany Yona Of The Dawn dia traikefa nahafinaritra, andian-tsarimihetsika tsy miteraka natiora misy hatsikana vaovao (sy hadalana) ka mahagaga. Indrindra eo an-tampon'ny hetsika rehetra, tantaram-pitiavana tsindraindray ary sehatry ny ady indraindray.
Izao dia mila vanim-potoana 2!
59. Vonoy ny La Kill
Izany azo atao ahoana ny andiany Ecchi iray mety ho hetsika feno tantara voasoratra tsara tokoa.
Ary izany no antony namonoan'ny Kill La Kill ny zavatra antenaiko ary nanintona ahy ny fahalianako.
Studio Trigger dia nanamboatra ny tenany tamin'ity iray ity. Ho iray amin'ireo sanganasa ankafiziko foana io.
Mifandraika: Ny lisitry ny farany famonoana an'i La Kill
Tsy noeritreretiko mihitsy hoe ny fialamboly 'Shoujo' dia mety ho nahafinaritra tokoa. Ary teo no nahadiso ahy.
Rehefa avy nihazakazaka tamina anime toa an'i Nana, novokarin'i Madhouse, tsy azoko inoana ny maha-zava-misy sy mahery an'io andian-tantaram-pitiavana io.
Ny endrika dia 'marina amin'ny fiainana', ary ny tarehin-tsoratra dia azo ifandraisany amin'ny lafiny maro.
Vitsy ny tantaram-pitiavana tonga manakaiky an'io noho ny zava-misy.
Mifandraika: Ny lisitry ny Anime Slice Of Life farany
Ny fomba tsara indrindra hilazana an'ity anime ity dia: malefaka, mora mandeha ary miala sasatra dia toy ny mangatsiaka eny amoron-dranomasina.
Maivana amin'ny hatsikana izany, fa ny lesona amin'ny fiainana an-tsokosoko sy ny mpilalao fototra am-po no mahatonga an'ity andiam-piainana ity tsy tokony ho tarain'ny mpankafy.
Ecchi hafa ity andiany izay nanimba ny zavatra antenaiko ambany. Ary nosoloiny fahafaham-po.
Shimoneta dia pilina sarotra atelina ho an'ny ankamaroan'ny mpankafy, noho ny halehiben'ny finoany, ny tetika, ny fiteny ary ny tanjony. Fa raha azonao atao ny mamoaka azy dia ho gaga ianao amin'ny halaliny ary na dia ny hatsikana aza dia omen'ity anime ity.
Minami-Ke dia ambany volo , sombin'ny fiainana sy andian-tantara mahatsikaiky adino. Manodidina ny 3 rahavavy mipetraka ao amin'ny tokantrano iray izy io, ary ny shenanigan rehetra azony.
Miaraka amin'ny fizaran-taona 3 sy cliches izay Raha ny marina mampihomehy, tsy nandalo fizarana mihitsy aho raha tsy nihomehy.
Hanome isa izany aho 10/10 nefa tsy hisalasala.
Land Of The Lustrous dia anime izay mahatonga an'i CGI ho tsara kokoa noho ny hatramin'izay. Ary raha nijery anime be dia be ianao dia ho fantatrao fa mahatsiravina ny CGI amin'ny ankapobeny.
Land Of The Lustrous dia mitondra azy any amin'ny ambaratonga hafa noho ny kalitaon'ny sarimiaina. Holazaiko fa mbola tsara kokoa noho i Violet Evergarden amin'ny fombany.
Ary ny tantara mihitsy dia mistery fa mahaliana ampy hitondra anao hatrany amin'ny farany nefa tsy mahatsapa ho nandany ny fotoanao.
A LEHIBE andiany misy tarehin-tsoratra tsy hay hadinoina.
65. Andiana Monogatari
Monogatari dia karazana anime manokana amin'ny sokajy supernatural / demony. Ita ilay karazana sarimiaina feno fifanakalozan-kevitra sy fizarana 'be resaka', ka mety hampiala olona sasany.
Fa raha mifikitra amin'izany ianao ary tonga any amin'ireo faritra tsara, dia ho tsapanao fa lasa nanjary nahagaga ny eritreritra sy nampientana ity anime ity.
Ary miaraka aminy novokarin'ny Studio Shaft, tsara tarehy ny sary mihetsika sy ny fifanakalozana eo anelanelan'ny sehatra.
Izany tononkalo mihetsika.
Nisekoi dia novokarin'ny studio Shaft, toa an'i Madoka Magica sy Monogatari ihany koa.
Tsy toy ny sarimiaina haremanao mahazatra ity izay feno klise sy tropikala tsy misy saina toa azy mafy handray izany ho zava-dehibe.
Nisekoi dia andiana kalitao misy toetra mendrika sasany izay manazava ny anime manontolo toy ny hazo krismasy amin'ny volana desambra.
Ny 'kanto' dia ara-dalàna.
Raha te hijery andiam-piainana miaraka amin'ny halalin'ny DEPTH ho an'ny mpilalao ianao, ary ireo hafatra mampieritreritra - Oregairu no mahita.
efa ho tsy misy ny tarehin-tsoratra amin'ity andiany ity dia tsy voasoratra tsara. Ireo mpandray anjara fototra dia mitazona soatoavina betsaka amin'ny tantara ankapobeny, ary ireo hafatra indraindray 'miafina' ambanin'ny tany.
Mahatsapa aho fa Oregairu dia ambany saina ary tsy ampy ny olona mihiaka momba izany. Na dia naoty ambony io.
23 Amin'ireo lahateny Anime lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra